Nezvedu - Xuzhou Xinqihang Plastic Industry Co., Ltd.
HDPE Yemvura Pipe
HDPE Solid Wall Pipe
HDPE Simbi Strip Yekusimbisa
HDPE Plastic Steel ichitenderera
HDPE Hollow Wall ichitenderera
HDPE Kaviri Wall Corrugated Pipe
MPP Simba Tube
CPVC simba pombi
Aluminium Alloy Yakarongedzwa Pulasitiki Yakaumbwa Pipe
HDPE Gas Pipe System
HDPE Gasi Pipe
Municipal Injiniya Pipe System
HDPE Trenchless Pipe
HDPE Heat Fusion Fittings
HDPE Siphon Pipe
Kuchera Injiniya Pipe Sisitimu
HDPE Kuchera Pipe
Zvekurima Irrigation Pipe System
HDPE Irrigation Pipe Fittings
Wona Zvese Zvirongwa
Xuzhou Xinqihang Plastic Viwanda Co., Ltd.
Yakazvipira kuvandudza kushanda pamwe nekuchengetedzeka kwekufambisa kwemvura, zvichiita kuti vanhu vave nehutano uye nyika ive nani. Chinangwa chedu uye chiono ndechekuva inovimbika kambani inogadzira kukosha kwenzanga, vatengi, vagovani nevashandi, uye inotora hunyanzvi sesimba rekufambisa kusimudzira.
Iyo kambani iri muQing'an Industrial Concentration Zone, Xuzhou City, Jiangsu Province, ine guta rakanyoreswa remamiriyoni makumi mashanu emamiriyoni euan uye nzvimbo yekuvaka inopfuura 70,000 mativi emamirimita. Kune vashandi vanopfuura zana, vashandi vasere vehunyanzvi uye vehunyanzvi, uye mainjiniya maviri. Iyo kambani ine yavo Buttonfield neShanghai Jingwei Kune anopfuura makumi maviri pombi yekugadzira mitsara (DN20mm-DN1400mm) senge Ningbo Fangli, uye yegore yekugadzira inokwana mapaipi epurasitiki anopfuura matani makumi matatu.
Iyo kambani inyanzvi yepamusorosoro inobatanidza R&D, kugadzirwa uye kutengesa. Parizvino, zvigadzirwa zvekambani zvikuru ndeinjiniya mainjiniya, gasi injinjini, yekuchera mainjiniya, yekumiginjiniya, yekurima kudiridza, magetsi mainjini masisitimu, HDPE mvura yekupa pombi, HDPE yekucheresa pombi, HDPE mapaipi gasi, HDPE murazvo-unodzora antistatic mapaipi epombi, HDPE Ground sosi kupisa pombi pombi, HDPE siphon abudise mapaipi, HDPE pombi fittings, MPP tambo jeketi mapaipi, nezvimwewo zvinodarika makumi maviri akateedzana uye anopfuura 6000 maratidziro ezvigadzirwa.
Hupenyu ndihwo Hupenyu
Hunhu hupenyu. Isu tinosimudzira zvakanyanya kukosha kwecheni yekutengesa, kugadzirisa hurongwa hwevatengesi, uye kuona hunhu uye kugadzikana kwerutivi rwekugovera. Isu tinoshandisa manejimendi manejimendi uye tinowana yakanakisa yemakwikwi makwikwi kuburikidza nehunyanzvi R & D manejimendi, yakazara mhando manejimendi, uye zvakaenzana mashandiro. Iyo kambani yakapasa ISO90001 yemhando yepamusoro sisitimu setifiketi, ISO14001 yekuchengetedza manejimendi system chitupa, OHSAS18001 yebasa hutano uye chengetedzo manejimendi system chitupa, BV, SGS, TUV munda uye chigadzirwa certification, uye zvigadzirwa zvaro zvakapfuura ISO4427, ASTM D3035, EN 12201, AS / NZS 4130 Yepasi rose yechitatu-bato kuyedza.
Kugadziridza ndiwo Mweya
Kugadziriswa mweya weimwe bhizinesi. Seye inovandudza indasitiri kambani, tinosangana nezvinodiwa zvakasiyana nevatengi kuburikidza neruzivo rwehunyanzvi uye hunyanzvi. Isu tine epamusoro-akajairwa maR & D nzvimbo uye marabhoritari, ayo anoramba achiita ongororo uye bvunzo gore rese, uye anogona kupa OEM yakagadziriswa masevhisi zvinoenderana nezvinodiwa zvakasiyana zvevatengi munzvimbo dzakasiyana, kuitira kuti vape vatengi nemhando yepamusoro mhinduro. Neyekuita kwakanakisa uye kuzivikanwa kwechiratidzo kwezvakagadzirwa, zvigadzirwa zvave zvichishandiswa zvakanyanya mupombi yekufambisa masisitimu muminda yekuvakwa kwenzvimbo dzemasiparati, maindasitiri, zvekurima, indasitiri yemakemikari, peturu, kuchera, aquaculture, kutakura nzira, uye kuvaka kwevanhu, uye yakavhurwa zvinobudirira Mumusika wepasi rose, inotumirwa kune dzinopfuura nyika makumi matatu nematunhu anosanganisira Bangladesh, Vietnam, Chile, Argentina, Czech Republic, Russia, UAE, Turkmenistan, Iran, neSudan, uye yakahwina kurumbidzwa kubva kuvashandisi!
Iko Kunakisa Kwakakosha kweXinqihang Plastiki Indasitiri PE Pipe
Yakakwira-mhando zvigadzirwa zvekugadzira
Kusarudza Sinopec uye kupinza zvigadzirwa zvemhando yepamusoro, isu tinotenda zvakasimba kuti chete zvigadzirwa zvakanaka uye hunyanzvi hwetekinoroji hunogona kuburitsa mapombi epamusoro.
Yakakwana yekugadzira michina
Tungamira mukutora midziyo yepamberi yekuwedzeredza ekugadzirisa michina, uye kusimudzira michina kuti ive pamberi peindasitiri.
A yakakosha technical timu yevanopfuura vanhu gumi, iine avhareji yemakore gumi eindasitiri yehunyanzvi ruzivo.
Yakakwana mhando manejimendi
Kuongorora kwekutanga kwezvinhu zvakasvibirira, kuumba mhando yekutarisa, kudzora kwemhando yepamusoro usati wasununguka.
Kukura kwekugadzira maitiro
Iyo fomula yakapedzwa yakaverengerwa kakawanda, uye mhando yemabatch akawanda inoendeswa kuti iongororwe.
Zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye masevhisi
Ipa hunyanzvi pre-kutengesa, mune-kutengesa, uye mushure-kutengesa masevhisi, uye upe yemahara technical technical rutsigiro.
Isu tinoomerera pane "kutendeka manejimendi, mhando yekutanga, kuhwina-kuhwina kubatana, kutarisirwa kwevanhu" seyakakosha tsika dzebhizinesi, uye tinogamuchira neushamwari vatengi vekunze nekune dzimwe nyika kuti vashanyire uye vatungamirire kambani yedu. Kambani yedu inozobatana nemwoyo wese kushamwari kubva kumatunhu ese neiyo pamwe pfungwa ye "mhando yepamusoro, yepamusoro mukurumbira, basa repamusoro" kugadzira ramangwana riri nani!
Adress: Qing'an Maindasitiri Ekumanikidza Zone, Xuzhou Guta, Jiangsu Province
Runhare: +86 15365811992